Israelfo ase trɛwee wɔ Egypt (1-7)
Farao hyɛɛ Israelfo so (8-14)
Onyankopɔn ho suro nti, mmea a wogye awo no gyee mmofra nkwa (15-22)
1 Bere a Yakob a wɔfrɛ no Israel kɔɔ Egypt no, ne mma no nyinaa ne wɔn fifo nso kɔɔ bi. Yakob mma no din ni:+ 2 Ruben, Simeon, Lewi, ne Yuda;+ 3 Isakar, Sebulon, ne Benyamin; 4 Dan ne Naftali; Gad ne Aser.+ 5 Ná Yakob mma ne ne mmanana nyinaa yɛ nnipa 70.* Yosef de, na ɔwɔ Egypt dedaw.+ 6 Akyiri yi Yosef wui,+ na ne nuanom nyinaa ne wɔn beresofo* nyinaa nso wuwui. 7 Israelfo* no wowoe, na wɔbɛyɛɛ bebree. Wɔn ase trɛwee na wɔbɛyɛɛ den ntɛmntɛm, na wɔhyɛɛ asaase no so ma.+ 8 Akyiri yi, ɔhene foforo bedii ade wɔ Egypt. Ɔno de, na onnim Yosef. 9 Enti ɔka kyerɛɛ ne manfo sɛ: “Hwɛ! Israelfo no dɔɔso na wɔn ho yɛ den sen yɛn.+ 10 Momma yɛmpɛ nyansakwan bi mfa wɔn mfa so. Anyɛ saa a, wɔn ase bɛtrɛw na wɔayɛ pii, na sɛ ɔko ba a, wɔbɛkɔ akɔka yɛn atamfo ho ne yɛn ako na wɔafi ɔman yi mu akɔ.” 11 Enti wɔde adwuma so ahwɛfo* sisii wɔn so sɛ wɔnhyɛ wɔn mma wɔnyɛ adwumaden;+ wɔma wɔkyekyee nkurow a wɔde bɛyɛ adekorabea maa Farao. Saa nkurow no ne Pitom ne Raamse.+ 12 Nanso bere a wɔrehyɛ wɔn so no, afei koraa na na wɔredɔɔso na wɔn ase retrɛw. Enti Israelfo no ho hu tɔɔ wɔn so.+ 13 Ɛbaa saa no, Egyptfo no hyɛɛ Israelfo no ma wɔyɛɛ nkoadwuma.+ 14 Wɔmaa asetena fonoo wɔn, na wɔhyɛɛ wɔn ma wɔyɛɛ adwumaden. Wɔma wɔwɔw dɔte de yɛɛ birikisi, na wɔma wɔyɛɛ afuw mu nnwuma nyinaa bi. Nkoadwuma biara a wɔpɛ sɛ wɔde wɔn yɛ no, wɔhyɛɛ wɔn ma wɔyɛe.+ 15 Akyiri yi, Egypt hene ne Hebrifo mmea a wogye awo no kasae; ɔbaako de Sifra na baako nso de Pua. 16 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ moregye Hebrini bea bi awo*+ na sɛ muhu sɛ abofra no yɛ ɔbarima a, munkum no, na sɛ ɔyɛ ɔbea de a, munnkum no.” 17 Nanso na wɔn a wogye awo no suro nokware Nyankopɔn no, enti wɔanyɛ nea Egypt hene ka kyerɛɛ wɔn no. Mmom wɔkoraa mmofra a wɔyɛ mmarima no so.+ 18 Bere bi akyi no, Egypt hene frɛɛ mmea a wogye awo no bisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na moakora mmarima no so?” 19 Ɛnna mmea a wogye awo no buaa Farao sɛ: “Hebrifo mmea no nte sɛ Egyptfo mmea. Wɔn ho yɛ den, enti ansa na nea ogye awo no bedu wɔn nkyɛn no na wɔawo dedaw.” 20 Enti Onyankopɔn ne mmea a wogye awo no dii no yiye; na Israelfo no yɛɛ bebree na wɔn ho yɛɛ den paa. 21 Esiane sɛ wɔn a wogye awo no suroo nokware Nyankopɔn no nti, akyiri yi ɔma wonyaa mma.* 22 Afei Farao ka kyerɛɛ ne manfo sɛ: “Abofra biara a Hebrifo no bɛwo no foforo no, sɛ ɔyɛ ɔbarima a, montow no nkyene Asubɔnten Nil mu, na sɛ ɔyɛ ɔbea de a, ɛnsɛ sɛ mukum no.”+
^ Anaa “Akra a wofi Yakob asen mu bae nyinaa si akra 70.”
^ Anaa “adwumaden so ahwɛfo.”
^ Anaa “Sɛ moregye Hebrini bea bi awo wɔ awo agua so.”